Belata Nchegbu - Igodo kacha mma iji nweta ya. Bezzia
Amaghị otu esi ebelata nchekasị? N'ezie ọ bụghị ihe dị mfe ịme mana ọ dịịrị anyị ịhọrọ usoro ma ọ bụ igodo ga -enyere anyị aka ịchịkwa ndụ anyị na n'uche anyị. Yabụ, anyị na -ahapụrụ gị nnukwu enyemaka nke ị ga -etinye n'ọrụ ozugbo enwere ike.
Mgbe ụfọdụ ọ na -apụta na mberede na ndụ anyị na nke a nwere ike ibute nnukwu nsogbu ma ọ bụ mwakpo ụjọ na anyị nwekwara ike mgbe anyị na -atụghị anya ya. Yabụ, tupu ihe niile emee, anyị ga -agbarịrị azụmaahịa. Oge erugo ịwakpo nsogbu ahụ n'ụzọ kacha mma anyị siri mara.
1 Na -ebute ụzọ mgbe niile na ndụ gị
2 Echegbula onwe gị nke ukwuu
3 Na -egosipụta mmetụta gị mgbe niile
4 Wepụta oge kwa ụbọchị
5 Nweta ezumike zuru oke iji belata nchekasị
Na -ebute ụzọ mgbe niile na ndụ gị
Enwere ihe ndị a na -agaghị eme site n'otu ụbọchị ruo na -esote, yabụ, anyị ga -emerịrị obere ihe mana nchekwa. Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu bụ nke a. Nchegbu na -apụta mgbe anyị juputara na nchekasị, mgbe anyị enweghị ike iwere ya ọzọ na akwara anyị dị n'elu. Ya mere, ọ ka mma mgbe niile ịkwụsị ma chee echiche. N'ihi na ihe ndabere niile bụ ibute ihe dị mkpa n'ezie na anyị ga -emerịrị ya. Ihe na -abụghị, nwere ike ichere n'ihi na ahụike anyị na -ebu ụzọ. Yabụ, ntọala ụbọchị anyị dị na nzukọ.
Echegbula onwe gị nke ukwuu
Ọ bụrụ na ị bịaghị n'oge iji mezuo ihe niile ị chere, echegbula. Maka na anyị niile nwere oke ma ị gaghị akarị ha ma ọ bụrụ na anyị amabeghị ihe na -echere anyị. Ọ ka mma iche echiche nke ọma, maka na ọ bụrụ na o nwere ihe ngwọta, gịnị bụ uru ichegbubiga onwe ya oke? Ma ọ bụrụ na ịnweghị ya, ọ dịghị mkpa. Anyị ga -ahapụrịrị echiche ọjọọ ndị ahụ ka ha na -asọ n'ihi na ọ bụghị na ha ga -ebi n'isi anyị, ọ ga -esikwa ike karịa ịga n'ihu.
Na -egosipụta mmetụta gị mgbe niile
Na ịhapụ ihe anyị na -eche n'oge ọ bụla n'ime abụghịkwa ihe dị mma. Ya mere, ịpụ apụ na -adị mma mgbe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ike, ọ nweghị ihe dị mma karịa gị na ndị ikwu gị ma ọ bụ ndị ahụ pụrụ iche ị nwere na ndụ gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nweghị ihe dịka onye ọkachamara ga -enye gị ndụmọdụ kacha mma. Mana otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ị ga -enwe ahụ iru ala karịa ma ọ bụrụ na ị wepụtara ya karịa ịhapụ ya n'ime. N'ezie ị marala, mana ọ naghị adị mfe mgbe niile itinye ya n'ọrụ na anyị maara ya. Ọ bụrụ na ọ ga -efu gị ego, buru ụzọ gbaa mbọ dee mmetụta ndị ahụ ị ga -ahụkwa na ọ bụ nzọụkwụ mbụ inwe ahụ ike.
Wepụta oge kwa ụbọchị
Ị nwere ike ị gaghị enwe oge buru ibu mana ihe dị mma bụ na anyị ga -enyerịrị onwe anyị nkeji ole na ole. N'ime ha ị nwere ike ime ihe masịrị gị, site na igwu egwuregwu ruo ige egwu. Ihe na -eme gị ahụ nke ọma, na -eme ka ahụ ruo gị ala, na -enyekwa gị ike zuru oke iji gaa n'ihu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị mkpa ịme ihe ndị dị mgbagwoju anya, mana ime obere mbọ kwa ụbọchị iji mezuo ihe ekwere na nkwa. Na oge maka anyị dị ọtụtụ.
Nweta ezumike zuru oke iji belata nchekasị
N'ezie, ndị chọrọ ibelata nchekasị anaghị enwe ezigbo ụra abalị. Insomnia nwere ike ịnọ na ọ bụ akụkụ ọzọ na -adịghị mma nke mere na nchekasị ka na -abụkwa nsogbu. Yabụ, anyị ga -etinyerịrị ụfọdụ omume kwa ụbọchị, ekwesịrị idobe ha n'ihe gbasara nhazi oge. Maka na ọ bụ mgbe ahụ ka ahụ ga -eji mara ya nke ọma. Mana ee, mgbe anyị nwere nsogbu ihi ụra, anyị ga -etinyerịrị ndị okenye dịka ịghara iri nri abalị, ịsa ahụ izu ike tupu ị lakpuo ụra ma ọ bụ gbanyụọ ụdị ngwaọrụ niile. Ị ga -ahụ ka ụzọ a na nchikota nke usoro niile, ị nwere ike belata nchekasị wee mụta itinye nchegbu gị n'akụkụ ntakịrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Psychology » Igodo iji belata nchekasị